TOAMASINA : Nirefodrefotra indray ny baomba mandatsa-dranomaso noho ny hetsiky ny mpitari-posy
Mampanahy......., izay no azo ilazana ny fisehoan’ny trangan-javatra manoloana ny vanim-potoana fihibohana eto Toamasina. 31 mars 2020
Vokatry ny fihetsehana ataon’ ireo tanora sy fokonolona ao amin’ny fokontanin’i Morarano sy Tanambao Verrerie ary Ambalakisoa iny, indrindra ireo mpitondra posy. Vao maraina ny alatsinainy teo dia efa nivory tao amin’ny Epp Morarano ireo mpitarika posy ary nitady hevitra fa horaiketina ny rotaka fa tsy ekena ny fisian’ny fihibohana fa mila miasa izy ireo satria tsy misy ny hanina.
Ny faran’ny herinandro teo, tamin’ny 9 ora sy 30 minitra maraina dia raikitra tokoa ary nitanjozotra hivoaka ny tanàna ireo mpitondra posy maro be. Raha tsorina dia tsy fahazakana ny fihibohana sy tsy fahafahana miasa no anton’ ireo hetsik’ireo mpitarika posy. Nisy ny nanana hevi-dratsy hamaky tranom-barotra sy handrava magazay. Tsy niandry ela anefa dia nifanena tamin’ny mpitandro filaminana ireo mpitarika posy manohitra ny fandaminana amin’izao ady amin’ny valanaretina coronavirus izao. Niezaka nanohitra ny mpitandro filaminana tamin’ ny alalan’ny tora-bato izy ireo. Vokany, nirefodrefotra ny baomba mandatsa-dranomaso.
Namaly tamin’ny tora-bato hatrany ny mpitokona izay nahavoatoraka mpanao gazety iray. Tsy nitsahatra nirefotra ny baomba ka nilefitra niditra tany amin’ny fokontany misy azy ihany ireo mpitokona ka voafehy aloha iny. Raha ny loharanom-baovao voaray dia hitohy anio ny hetsika hataon’izy ireo raha ny loharanom-baovao amin’ny alalan’ny paikady hafa. Hatreto dia ho sarotra aloha ny hilaza fa ho voafehy ny fihibohana ho an’ i Toamasina ary ahiana noho izany ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus.